Ezingxenyeni eziningi kakhulu, uhlelo lwaluphi ukuhlolwa kwe-laboratory yesiguli ezinezifo cishe noma yiluphi uhlelo lombuso noma lomzimba oluqala ngokuhlolwa kwegazi lomtholampilo. Kulolu cwaningo, isifundo senziwe ngokubunjwa kwamaselula egazi, kanye nokucwaninga kwezakhiwo zalezi zici zamangqamuzana. Kuyinto izinguquko ohlelweni lwe-hematopoiesis olwenzeka ngokushesha kakhulu futhi lungomunye owokuqala ukubonisa inkinga ezayo, futhi imiphumela yokuhlolwa kwegazi emtholampilo ingabonisa izinguquko kwelinye, amahlumela amabili noma amathathu we-hematopoietic, ngakho-ke kudingeka ulalele amapleletthi amabili aphansi futhi aphakanyisiwe, amaseli egazi amhlophe noma Ama-erythrocytes.
Ukushintsha inani lamaplatele - yisizathu sokuba sesilumeni
Emzimbeni womuntu, ama-platelets anomsebenzi obalulekile - lawa maseli angenambala athatha ingxenye eqondile ezinkambeni ze-clotting igazi, ngokulandelana, uma izinguquko kwinani lala maseli, kukhona ukwephula ohlelweni lwegazi lokugcoba. Amaplatelet aphakanyisiwe, kungakhathaliseki imbangela yalesi simo, angabangela ama-blood clots, kanti inani elincishisiwe lala maseli lidala ukuphuma noma uketshezi phansi kwesikhumba. Izindinganiso ezivamile zeziguli ezikhulile zingamaplateletshi egazi e-peripheral angu-180-320 * 109 / L, kuyilapho kubantwana, ikakhulukazi ngesikhathi sokuzalwa nokuzalwa (eminyakeni engaba ngu-3), iplatelet yegazi cishe iphakanyisiwe njalo ekuvivinyweni kwegazi.
Ngokungangabazeki, iziguli eziningi zikhathazekile ngokunciphisa okubukhali ngenani lamapulangwe angaphansi kwesimiso seminyaka yobudala, nakuba ngisho ne-thrombocytopenia enzima, imiphumela ephawulekayo emzimbeni ikhula uma inani labo liwela ngaphansi kwe-20 * 109 / L futhi cishe akukaze kube nokukhathazeka uma ama- platelet enyuka. Izimbangela zalesi simo zingase zihluke - kusukela ekubukeni kwegazi ngokomzimba ngokulahlekelwa ngokweqile ketshezi esikhunjeni noma embranini emangcwabeni emathunjini noma emoyeni, isibonelo, esishisayo noma lapho kwenzeka khona ukuphazamiseka kwamathumbu, kuze kube yizikhathi lapho amaplatele aphakanyisiwe abonisa ukuthi kwenzeke izifo zomzimba.
Inombolo ekhuphukile yamaplatelet njengempawu yezifo
Ezimweni eziningi, amaplatelets akhula avela ekutheni umuthi we-hematopoiesis we-bone, futhi lesi sibonakaliso singabonakalisa kokubili ekunqothulweni kwehlumela leplatelet kanye nokulimala okuphelele emnothweni wamathambo, isibonelo ekuthuthukiseni izifo ze- myeloproliferative (i- leyemia engapheli, i-myelodysplasia, i- subleukemic myelosis).
Ngokuvamile kakhulu, inani elikhulayo lamaplatelets liyenzeka ngemuva kokungenelela kokuhlinzeka, ngenxa yesinye isizathu noma esinye, i-spleen kufanele isuswe - isibonelo, ngokulimala kwakhe, izicubu, noma izifo, lapho inani leplatelet liyehla khona njalo, futhi ukususwa kwe-spleen kungukusebenza kokuphelelwa yisikhathi. Ukwandisa ezingeni lamaplatelets kuleli cala kwenzeka ngoba yi-pengu ngaphansi kwezimo ezivamile eziba "amathuna" alawa maseli egazi, futhi esibindi, ukusetshenziswa kwamaseli abomvu abomvu kwenzeka kakhulu.
Ngokuvamile, amapleletthi aphakanyisiwe abe yizibonakaliso zezifo ezithile ze-viral, kodwa le thrombocytosis ifika ngokushesha kakhulu futhi ingatholwa kuphela uma ukuhlaziywa kuthathwa ngengozi ngesikhathi sokusabalalisa okuqhubekayo kwegciwane emzimbeni.
I-Thrombocytosis. Ngidinga ukuyiphulukisa?
Ezimweni eziningi kakhulu, inani elinyuka lamaplatelet liyadingeka kuphela ngokukhushulwa okukhulu, okuyinto esongela ukuthuthukiswa kwezifo. Ukuze wenze isinqumo kunoma yiliphi icala elithile, kubalulekile ukuthi usebenzise ukuhlolwa okunamandla kwemingcele yokuhlolwa kwegazi, futhi, ngokuqhubeka kwe-thrombocytosis, ukugqama okuphakade ne-trepanobiopsy kwephiko le-ilium kwenziwa. Ukuhlolwa komnyofu wethambo kanye nesifundo sesakhiwo sesitembu kusiza ukuqonda ukuthi inani elikhuphukile lamaplatelet lihlukile kumkhuba wokuphila noma isibonakaliso sokuqala sesifo esiyingozi.
I-liposuction yesisu yisindlela sokulungisa lesi sibalo
Ukwelashwa kokuguguleka kwesibeletho ngamagagasi omsakazo: izici zenqubo
Ishidi Sty - yafuna uhlobo zensimbi